Nkosikazi Miriam Chikukwa: Umasipala weHarare Kazame Amanye Amacebo
Ntulikazi 29, 2015
UNkosikazi Miriam Chikukwa
Umphathintambo ophethe isigaba seHarare uthi sokudingakala ukuba i-Harare ilungisise okufunekayo endaweni ezintsha zokuthengisela zabantu abaphila ngokuzenzela
Unkosikazi Miriam Chikukwa wethule amazwila ngesikhathi ehamba hamba ehlangana labantu abaphila ngokuthengisa phakathi kwedolobha le Harare ethi kuqakathekile ukuba basebenze kakuhle ngokusemthethweni ethi umasipala waleli dolobha kumele alungisise ngesiphangiphangi konke okudingakalayo endaweni ezintsha ezinikezwa lababantu ukuba beyosebenzela kizo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi wenhlanganiso emela abazisebenzayo laba eye Zimbabwe Informal Sector Organization ZISO uthi ama Vendor abhekana lobunzima bokuba lezindawo zikhatshana njalo zingela bhizimusi elihle lezinto ezidingakalayo bona bebhadaliswa izimali njalo kulobudlwangudlwangu. Uthi ama vendor amanengi lokhe engathakazeleli ukuyasebenzela endaweni lezi ikakhulu eziphandle kwedolobha.
Umnumzana Obert Dube oyisakhamuzi se Harare ephila ngokuzenzela uthi ukususwa kwama vendor kuphathise kakhulu ukuba kube lokubetha komoya phakathi kwaleli dolobha:
U Masipala we Harare ulungisele abantu indawo ezingaphandle leziphakathi laphakathi kwedolobha ukuba abafuna ukuthengisa bethengisele kizo bebhadala inhlaulo njalo besebenza ngokusemthethweni kodwa ama Vendor athi lezindawo azilakho konke okudingakalayo okwenelayo okufana lezambuzi lempompi zamanzi.
UChikukwa uthi imisebenzi enje iyadingakala okulabantu abanengi njalo uzafuqa ngokuzwayo ukuba umasipala enze lokhu ngesiphangiphangi.
Ama vendor amanengi asuswae phakathi kwedolobha le Harare noma amanye lokhe ebuya ethengisa ecatshelana lamapolisa ka masipala asetholakala ezulazula lalelidolobha ngama talakita lama roli exotshanisa abathengisayo.
Isikhulumeli salelidolobha besingasabeli umakhalekhukhwini waso ukuba sizwe ukuba lelidolobha lilemizamo bani yokulungisisa loludaba.